4 zviitiko zvekuita mukati Autumn kunze | Bezzia
4 zviitiko zvekuita mukati Autumn kunze
Maria vazquez | 01/09/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/08/2021 23:45 | Kufarira
Kuwa kunounza nekapasi tembiricha asi zvakadaro zvinonakidza kunakidzwa nekunze zviitiko. Kwete nekuti kudonha kunouya isu tinofanirwa kusiya izvozvi tozvivharira kumba. Kune akawanda zviitiko zvekuita mumatsutso izvo zvinotibvumidza isu kunakidzwa nekusarudzika kweiyi nguva yegore.
Tinogona kufunga nezveakawanda marongero atinogona kuita mukati megore asi izvo mumatsutso vane ruvara rwakakosha. Kunyangwe uri muboka kana wega, vanoda mitambo yekunze vachakwanisa kunakidzwa nenzvimbo dzisingaenzanisike panguva ino. Asi kune zvimwewo zvimwe zvakasununguka zviitiko zvaunogona kunakidzwa zvakanyanya.
1 Kukwira nemumapaki echisikigo
2 Migwagwa yebhasikoro kuburikidza negreenways
Kukwira nemumapaki echisikigo
Autumn inotipa inonakidza nzvimbo uye izvo zvinoita kuti ive yakakodzera nguva yekushanyira imwe yemapaki mazhinji epanyama munyika medu. Izvi zvinotipawo nzira dzakasiyana saka hazvinetsi kuchinjisa mafambiro kune hunhu hweboka.
Iwe unoda here mamwe mazano? Kune akawanda mapaki echisikigo izvo zvinotaridzika zvakanakisa mumatsutso: Fraga de Catasós muPontevedra, Gorbeia muBasque Country, Urbasa muNavarra, Somiedo muAsturias, Picos de Europa muLeón, Montseny muCatalonia, Arribes del Duero muZamora neSalamanca, Cazorla, Segura uye las. Villas in Jaén, the Sierra Nevada in Granada….
Ukaenda nevana Iwe unogona kuita kuti kufamba kwacho kunakidze nekuita chimwe chinhu chakareruka sekutora mashizha ematsutso, uchiasarudzika nematoni emashizha awo, ayo mumatsutso anotama kubva pagirinhi achienda kune yero uye tsvuku. Mushure mezvo, unogona kusarudza akanakisa uye nekuomesa mumuchina wekugadzira kuti ugadzire hunyanzvi hwakasiyana muchando.
Migwagwa yebhasikoro kuburikidza negreenways
Neshanduko yemashizha kuva yero uye ocher, pane greenways inoshanduka mukuvhuvhu. Uye wadii kuvadzokororazve nebhasikoro? Vanoti mabhasikoro ndee chirimo asi tembiricha yematsutso inonyanya kunakidza kuti unakidzwe nemutambo uyu, haubvumi here?
MuSpain kune Makiromita zviuru zviviri zvegreenways, muhuwandu hwavo hwakawanda hwakateedzerwa panzira dzekare dzechitima dzakabviswa. Sezvo mazhinji acho achitevedza nzira yemakwara ekare, iwo zvakare akapfava, saka iwo mafambiro anofadza kumhuri yese.
Iyo Sierra de la Demanda Greenway pakati peLa Rioja neBurgos, iyo Plazaola Greenway muNavarra, iyo Carrilet Greenway iyo inodarika mipata yenzvimbo ine makomo yeLa Garrotxa, iyo Oso Greenway muAsturias uye neGreenway yeMonfragüe kuCáceres, ingori zvimwe zvirevo. .
Nekusvika kwematsutso, mwaka wehwahwa muSpain unotanga. Panguva ino yegore vanogona kuunganidzwa boletus, morels, chanterelles, chanterelles, mabhosvo erufu ... Mamwe anokura pasi pemiti, nepo mamwe achikura pahuni mukuita kuora.
Kutsvaga howa, kuunganidza uye kubika iyo inzira yakanaka yekushandisa nguva panze. Imwezve yezviitiko zvekuita muKwindla iyo inobvumidza iwe kunakirwa wega kana mune kambani yezvakasikwa. Usati watanga pairi, zvakadaro, ndizvo Zvakakosha kuziva mhando dzakasiyana uye kuziva kuti ndeapi ane chepfu uye ndeapi anodyiwa.
Kune akawanda marudzi efungi uye mamwe anogona kuuraya kana akamedza, saka kutanga nemumwe munhu ari nyanzvi panyaya iyi kunogona kubatsira zvikuru. Dzidza zvakakosha uye usamire kudzidzira kuunganidza howa hwemwaka uye uzvidye mushe.
Une munda here? Nakidzwa nekuita chaiwo mabasa enguva ino yegore. Bvisa chero zvirimwa zvinorwara kana zvinhu zvekudyara kudzivirira kupararira kwezvipembenene nezvirwere. Mushure mezvo, prune conifers uye evergreen uye woisa organic manyowa.
Ino nguva yegore ndiyo zvakare yakanaka kudyara tulip, hyacinth kana daffodil mababu. Kuti udonhe mabhuru uye gore kuti utumbuke muchirimo, iwe unozofanirwa kudyara mukudonha. Iwe unogona zvakare kudyara mwaka wemaruva senge chrysanthemums, pansies kana heather inozoshongedza gadheni
Ehe, kune rumwe rutivi, unoda kutanga gadheniPanguva ino unogona kudyara celery, hanyanisi, broccoli, parsnip, karoti kana sipinashi, pamwe nemiti inonhuhwirira yakaita sevalerian, rosemary, thyme kana parsley.
Ndezvipi zvezviitiko izvi zvekuita muAvhu zvinonyanya kutarisisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Lifestyle » Kufarira » 4 zviitiko zvekuita mukati Autumn kunze
Cascade kuruka: Tsvaga kuti ungazviita sei nenzira yakapusa!
Zvikonzero nei musingafarire bonde semurume nemukadzi